254 632 มุมมอง
သရုပ်ဆောင်- နေရဲ ခင်လိူင် ဒိန်းဒေါင် စိုးမြတ်သူဇာ ၀ါဆိုမိုးဦး နန်းထိပ်ထား ဂွမ်းပုံလေး
Facebook Page - facebook.com/zappicture
THworld - #thworld.info/code/_IUdjPSWoo1jov91VEHa7A.html
HD Quality များဖြင့် Arr Mann Entertainment THworld Channel မှ
Arr Mann Entertainment THworld Channel မှ တင်ဆက်ပြသသော
Facebook, THworld, Social media ပေါ်တွင် အပျော်သဘောဖြစ်စေ၊
#ခင်လိူင် #ဒိန်းဒေါင် #စိုးမြတ်သူဇာ #Comedy #myanmarmovie #arrmann
သ႐ုပ္ေဆာင္- ေနရဲ ခင္လိူင္ ဒိန္းေဒါင္
စိုးျမတ္သူဇာ ၀ါဆိုမိုးဦး နန္းထိပ္ထား ဂြမ္းပုံေလး
HD Quality မ်ားျဖင့္ Arr Mann Entertainment THworld Channel မွ
Arr Mann Entertainment THworld Channel မွ တင္ဆက္ျပသေသာ
Facebook, THworld, Social media ေပၚတြင္ အေပ်ာ္သေဘာျဖစ္ေစ၊ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖစ္ေစ၊
ျပသပါက ခိုးယူျခင္းေျမာက္ပါသျဖင့္တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ အေရးယူနိုင္ၿပီး မိမိတို႔အေကာင့္မ်ားလဲပ်က္စီးေစနိုင္ပါေၾကာင္း သတိေပးအပ္ပါတယ္။
MYANMAR MOVIES3 วันที่ผ่านมา
အားပေးကြည့်ရူ့ခြင်းအတွက် အားမာန်မှအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဇာတ်ကားကောင်းများ တင်သောအခါ ချက်ချင်းသိရအောင်လို့ Arr Mann Entertainment THworld Channel ကို Subscriptions, Like, Share and Get Notification လေးလုပ်ထားလို့ရပါတယ်။
Arr Mann Entertainment3 วันที่ผ่านมา
Saw koko Yo6 วันที่ผ่านมา
Arr Mann Entertainment5 วันที่ผ่านมา
Amarin Mobile6 วันที่ผ่านมา
Arr Mann Entertainment6 วันที่ผ่านมา
Po Pa8 วันที่ผ่านมา
Arr Mann Entertainment7 วันที่ผ่านมา
ဇာတ္လမ္းကညံတဲ့အထဲ breakdance လားဘာအကလဲမသိေတာ္ေတာ္ညံလို႔ဒီကားတစ္ကားလံုးေအာက္ဆံုးကို႔ပို႔လိုက္တလိုပါပဲ မင္းသားသစ္ေတြကအမူအရာညံလြန္းတယ္စကားေျပာတာကအစပဲ လံုးဝမၾကည့္သင့္တဲ့ကားမွာမပါဘူး Rating-4 out of 10
jeffrey maung8 วันที่ผ่านมา
Arr Mann Entertainment8 วันที่ผ่านมา
Yoon Nadi8 วันที่ผ่านมา
ဇာတ်ကားကောင်းများကို ကြိုးစားတင်ပေးသွားပါ့မယ်။ ဇာတ်ကားကောင်းများ တင်သောအခါ ချက်ချင်းသိရအောင်လို့ Arr Mann Entertainment THworld Channel ကို Get notification လေးလုပ်ထားလို့ရပါတယ်။ အားပေးကြည့်ရူ့ခြင်းအတွက် အားမာန်မှအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဇာတ္ပို႔အားလုးံေကာင္းတယ္ ဇတ္ေဆာင္ေတြ က မေကာင္းဘူး လိုေသးတယ္😋😋😋😋😋
Shwe sin8 วันที่ผ่านมา
သရုပ္‌ေဆာင္ အားလံုကို အား‌ေပ‌ေနပါတယ္ စက္ျကိုးစာျကပါ
Aeeo Myanmar9 วันที่ผ่านมา
Arr Mann Entertainment9 วันที่ผ่านมา
Thanks arr mann movies.nice channel
Wint Thu Han9 วันที่ผ่านมา
Ko Thu Thu8 วันที่ผ่านมา
စောက်ကျိုးနဲ့မင်းသား မင်းသမီး ပရမ်းပတာ ကား
May ji Bawk ra May ji Bawk ra10 วันที่ผ่านมา
San San Sint10 วันที่ผ่านมา
Thanks Arr Mann
Myat Thu8 วันที่ผ่านมา
Thank you Arr mann movie So nice movie.
Ni Ni Lwin10 วันที่ผ่านมา
Arr Mann Entertainment10 วันที่ผ่านมา
Noob G 1 AA10 วันที่ผ่านมา
@Jaden Jaime I am trying it out now. Looks promising.
Rodrigo Johnathan9 วันที่ผ่านมา
not sure if anyone givesashit but yesterday I hacked my girlfriends Instagram password using Instapwn. Just google for it if you care
Jaden Jaime9 วันที่ผ่านมา
pp phone10 วันที่ผ่านมา
1 ngal10 วันที่ผ่านมา
မြန်မာဇာတ်ကား ၊ အထာပေးတဲ့ဆရာကြီး(စ/ဆုံး) နေတိုး ချောရတနာ စိုးပြည့်သဇင် ၊ Myanmar Movies ၊ Comedy ၊
มุมมอง2085 426
သွေးမျက်ရည် (ဇာတ်ကားကြီးစဆုံး) ဒွေး လူမင်း နန္ဒာလှိုင် Bloody Tears / Myanmar Movie မြန်မာဇာတ်ကား
မြန်မာဇာတ်ကား - အမွှေအနှောက်ကသေလောက်တယ် - ဇေရဲထက် ၊ ငွေမှုန်ရတီ - Myanmar Movies ၊ Romance ၊ Funny
မြန်မာဇာတ်ကား၊ အကြွေးတော်ပုံအောင်ရမည်(ဟာသကား-စ/ဆုံး) ခန့်စည်သူ အိချောပို
မြန်မာဇာတ်ကား ၊ မိုက်သွေးသစ္စာ(အက်ရှင်-စ/ဆုံး) နေထက်လင်း ၊စစ်သွေး ၊ ပန်းဖြူ ၊ Myanmar Movie ၊ Action